भिडियो Archives - Page7of9- Medianp
गायिका मञ्जु पौडेलकी छोरी स्नेहा पौडेल भन्छिन्, ‘ममिलाई विवाहका लागि आउने प्रपोजले हैरान बनायो’ (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २०, २०७४१०:५८0
काठमाडौं, २० जेठ । चर्चित लोक गायिका मञ्जु पौडेलकी छोरी स्नेहा पौडलले आफुलाई विवाहका थुप्रै प्रस्ताव आउने गरेको बताएकी छन् । मिडिया एनपी टिभीसँगको कुराकानीमा स्नेहाले आफ्नो विवाहका लागि ममीलाई थुप्रैले प्रस्ताव राख्ने गरेको बताइन्
श्रीमान् श्रीमतीबीचको झगडामा तेस्रो व्यक्तिको प्रवेशले ‘मन्दिरा’ रोमाञ्चित (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १९, २०७४०९:५८0
काठमाडौं, १९ जेठ । पछिल्लो समय एकै सट र एउटै घरमा पूरै चलचित्र सुटिङ गर्ने टे«न्ड बढ्दै गएको छ । आगामी असार २३ गते रिलिज हुने ‘मन्दिरा’ पनि एकै घरमा सुटिङ गरिएको चलचित्र हो ।
नायक प्रदीप खड्का, जसले खोल्दैछन् दरबार हत्याकाण्डको रहस्य
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १८, २०७४०८:०४0
काठमाडौँ १७ जेठ । नेपाली इतिहासकै कालो दिन मानिएको जेठ १९ अर्थात् दरवार हत्या काण्डको प्रमुख कारण मानिएको दिपेन्द्र र देवयानीको प्रेमकथामा आधारित फिल्म बन्ने भएको छ । नाती जर्नेल तथा राप्रपाका नेता पशुपति शम्शेर राणाकी छोरी देवयानी राणा
एक अचम्मका नेपाली, जो लगातार ४ हजार पटक औंला पड्काउन सक्छन् (भिडियो सहित)
Media NPप्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १७, २०७४१३:४२0
काठमाडौं, १७ जेठ । एक जना मानिसले लगातार ४ हजार पटक औंला पड्काउन सक्छ भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । किनकी मानिसहरुले सामान्यतया दिनमा एकपटक औंला पड्काउन सक्छन् । तर, एक जना यस्ता व्यक्ति छन्
कस्ता थिए बाजुराको कोल्टीमा मृत्यु भएका महासेनानी कैलाश गुरुङ्ग ? (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ १६, २०७४२०:०३1
काठमाडौं, १६ जेठ । मंगलबार बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा मृत्यु भएका नेपाली सेनाका महासेनानी कैलास गुरुङ्ग यस्ता व्यक्ति हुन् जो जोखिमपूर्ण काम गर्न निकै उत्साहित हुन्थे । भोजपुरको साविक छिनामखु गाविसको वडा नं. २
ओलीको प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न : कतिवटा बिहे गर्‍यो भने मानसम्मान पाइन्छ ?
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ १६, २०७४१९:३१0
काठमाडौँ १६ जेठ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रदान गरिएको पदकको चर्को आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुत्र प्रकाश दाहाललाई पदक प्रदान गरिएको भन्दै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न
मलाई हिट हुनु छैन, लोकप्रिय हुनु छ : गायक हेमन्त शर्मा (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ १६, २०७४१४:४७0
काठमाडौं, १६ । गायक हेमन्त शर्माले आफुलाई अहिलेसम्म कुनै पनि अरोप नलागेको बताएका छन् । मिडिया एनपी टिभीसँगको कुराकानीमा शर्माले आफु कुनै पक्षले आरोप लगाउने ठाँउ भए त्यसमा पहिलेनै सजग हुने गरेको सुनाए । उनले कुनै
बन्ने भो लाउरे, गायक नरेन लिम्बूले सृष्टि श्रेष्ठसँग रोमान्स गर्दै (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ १५, २०७४११:२५0
काठमाडौं, १५ जेठ । पूर्वको धरान सहर ‘लाहुरेको सहर’ का रूपमा परिचित छ । धरानमा बस्ने अधिकांश ब्रिटिस आर्मीका लाहुरे छन् । अब त्यही लाहुरेको कथावस्तुमा आधारित रहेर चलचित्र बन्ने भएको छ । यसअघि होस्टल,
गोमा एयरका चालक पारस राई र सहचालक श्रीजन मानन्धरको शव काठमाडौं ल्याइयो (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १४, २०७४१३:०४0
काठमाडौं, १४ जेठ । सोलखुम्बुको लुक्ला विमानस्थलमा शनिबार दुर्घटनाग्रस्त गोमा एयरका चालक र सहचालकको शव काठमाडौं ल्याइएको छ । दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका विमानका चालक राईको लुक्ला अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । सहचालक
काठमाडौं महागनरको मेयर जितेपछि यस्तो देखियो विद्यासुन्दरको विजय र्‍याली (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ १४, २०७४१२:२६0
काठमाडौं, १४ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि विजय र्‍याली निकालिएको छ । महानगरमा नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएका छन् । उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी उमेद्वार हरिप्रभा खड्गी विजयी भएकी छन् । यस्तो देखियो